China Base Mount (Ọnụ ụzọ abụọ) PM2 Series DC Isolator Gbanye ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | FEIMAI
Ugwu Ugwu (Ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ) PM2 Series DC Isolator Gbanye
• Base ndokwasa na din okporo ígwè, na ahụ ndokwasa n'èzí ụzọ site aro
• Ogologo osisi nwere ike ahaziri site ahịa
• Gbanyụọ mkpọchi
ADELS Series DC Isolator Switches ka etinyere na l ~ 20 KW obibi ma ọ bụ azụmaahịa fotovoltaic sistemụ, tinye n'etiti modul fotovoltage na inverters. Oge ịbata bụ ihe na-erughị 8ms, nke ahụ na-eme ka usoro mbara igwe dị mma karị. Iji hụ na ya kwụsiri ike na ogologo ọrụ ndụ, anyị na-mere site na mmiri na kacha mma. Max voltaji ruru 1200V DC. Ọ na - ejide ndu n'etiti ngwaahịa ndị yiri ya.
PM2 Series DC Isoator gbanyere
.Dị FMPV16-PM2, PMPV-25-PM2, FMPV32-PM2
Gosiri oge dị mkpirikpi iguzogide ugbu a (lcw) Ikenna Ojukwu
Polarity Enweghị polarity,,,+ ”Nd“ - ”polarities nwere ike ịgbanwerịta
Emepụtara ndị PM2 Series DC Isolators ka ịgbanwee Direct Current (DC) na voltages ruo 1200Volts. Nzube ha siri ike na ike igbanwe voltages ndị dị otú ahụ, na ọkwa dị ugbu a, pụtara na ha dabara adaba iji mee ihe na ngbanwe nke sistemụ fotovoltaic (PV).
Iji belata ohere nke arc ịgbasa, mgbanwe PM2 Series jiri teknụzụ kọntaktị rotary. Ezubere nke a iji mee ma mebie okirikiri ahụ site na nzukọ ịkpọtụrụ okpukpu abụọ na-ehichapụ nke na-ehichapụ ka ọ na-agagharị. Ihichapụ ọrụ ahụ nwere uru ọzọ dị na idebe ihu kọntaktị dị ọcha wee si otú ahụ belata mbugharị sekit na ịbawanye ndụ nke ọkụ ọkụ.
Nke gara aga: ELR1 Series nchọ Version Lockable Rotary emefu DC Isolator Gbanye
Osote: Panel arịọnụ PM1-2P Series DC Isolator Gbanye
DC Isolator Gbanye PM1 Series